Thursday,5Sep, 2019 3:37 PM
नेपालमा एउटा अत्यन्तै डर लाग्दो घटना हालै भएको छ । त्यो हो एटिएम ह्याक । यसले बैंकर र बैंकको सफ्ट्वेयर सेक्यूरेटीका बारेमा प्रश्न मात्रै उठेको छैन । बैंकहरुको एटिएम सुरक्षा माथी पनि प्रश्न उठेको छ । एक सीइओले नाम नलेख्ने शर्तमा भनेः– २८ वाणिज्य बैंक मध्ये १२/१५ वटा बाहेक सबैको बैकिङ्ग सफ्ट्वेयर नक्कली छ । कम मूल्यको छ । केही बैंकहरुले हालै ‘फिनाकल–१०’ जस्ता राम्रा सफ्ट्वेयर चलाएका छन् । नक्कली सफ्ट्वेयर भएका बैंकहरुमा फेरि भोली अर्को काण्ड नहोला भन्न सकिदैन । उनीले प्रस्टै भनेः– अधिकाशं बैंकको एटिएम मेसिन र कार्ड नै चीनका कम्पनीहरुले बनाएका छन् । सस्ता छन् । कमिशन खाएर नेपाल ल्याएका छन् । यी मेसिन र कार्डबाट ग्राहकले विश्वास गर्ने ठाँउ नै छैन ।
यति धेरै पैसा निकाल्दा भिसा कार्डको मुख्य कार्यालय अमेरिकाले पटक/पटक मेल र टेलिफोन गर्दा पनि नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) कहाँ सुतेर बसेको थियो । नेप्सका सीइओ प्रविण प्रकाश क्षेत्रीलाई किन अनुसन्धान नगर्ने ? अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ज्यू ? यसको उत्तर छ ?